By Htet Wai Aung - March 12, 2019
ထိုသို့သော ယူနီကုဒ်စနစ်ကို လိုက်နာရေးသားထားသည့် ပြည်ထောင်စုဖောင့် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ်သည် ယခင် Myanmar3ဖောင့် ကို အဆင့်မြှင့်ထားသည့် ဖောင့် ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။ (Myanmar4ဟု မခေါ်တွင်ဘဲ ပြည်ထောင်စုဟု ပြောင်းလဲ ခေါ်တွင်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်) ။ ပြည်ထောင်စုဖောင့်တွင် ယခင် Myanmar3ဖောင့် နှင့် အဆင်မပြေ မကိုက် ညီသည့် ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်မှုစနစ် (Operation System) များ၊ Office များ အတွက် ပိုမို အဆင်ပြေစေရန် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် Myanmar3တွင် မပါဝင်သေးသည့် တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားများ ပါဝင်လာပါသည်။
(၃) Keyboard Layout ပြောင်းသွားသလား?
ပြည်ထောင်စုဖောင့် စာရိုက်ရသည့် Keyboard Layout သည် ယခင် Myanmar3Keyboard Layout အတိုင်း ပြောင်းလဲစရာမလိုဘဲ ရိုက်နိုင် ပါသည်။ ယခင် Myanmar3နှင့် ရိုက်ထားသည့် စာများကိုလည်း ပြည်ထောင်စုဖောင့်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုပါက မိမိပြောင်းလိုသည့် စာများကို ရွေးချယ်၍ Office ၏ ဖောင့် နေရာတွင် ပြည်ထောင်စုဖောင့်ကို ပြောင်းလဲပေးနိုင် ပါသည်။ ဖောင့်အမည် နှင့် စာလုံးပုံစံ သာ ပြောင်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြား ပြောင်းလဲမှု မရှိပါ။
(၄) Version ဘယ်လို ရွေးရမလဲ?
မိမိ အသုံးပြုသည့် ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်မှုစနစ်၏ Version ပေါ် မူတည်၍ ဖောင့် Version ရွေးချယ် အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Windows OS (7 or XP) နှင့် Office (2007, 2010) တို့အတွက် ပြည်ထောင်စုဖောင့် Version 1.8 ကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Window 10 နှင့်အထက် Office (2013, 2016) စသည် အထက်တို့တွင် ပြည်ထောင်စုဖောင့် Version 2.5 ကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Adobe နောက်ဆုံးထွက် Version များတွင်လည်း ယူနီကုဒ်စနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ https://www.unicode.today/fonts-download/ နှင့် http://mcf.org.mm/download-center/ pyidaungsu-font.html တွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(၅) ပြည်ထောင်စုဖောင့်က ဘာတွေ ပိုထူးလို့လဲ ?
သို့ဖြစ်ပါ၍ ပြည်ထောင်စုဖောင့်သည် အမည်ကို မရင်းနှီးသေးသည့် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ Unicode စံ ကို ပိုမို ကိုက်ညီစွာ လိုက်နာထားပြီး၊ တိုင်းရင်းသားဘာသာ စကားများ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ နောက်ဆုံးထွက် ကွန်ပျူတာ လည်ပတ်မှု စနစ်၊ Office, Google, Facebook အစရှိသည့် ဆိုရှယ်မီဒီယာများနှင့် အခြား Applications, Software များတွင် အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာတို့၏ မပြီးနိုင်သေးသော တိုက်ပွဲ
Unicode on Adobe
Unicode Tools for development
FUJIFILM X - mount အတွက် Fujinon Lenses လေးတွေနဲ့...